किङ स्मिथले शतक बनाएपछि अष्ट्रेलियाले भारतलाई दियो २८७ रनको लक्ष्य ! जित कस्को ? - News20 Media
किङ स्मिथले शतक बनाएपछि अष्ट्रेलियाले भारतलाई दियो २८७ रनको लक्ष्य ! जित कस्को ?
January 19, 2020 January 19, 2020 N20LeaveaComment on किङ स्मिथले शतक बनाएपछि अष्ट्रेलियाले भारतलाई दियो २८७ रनको लक्ष्य ! जित कस्को ?
एजेन्सी : अष्ट्रेलिया र भारतबीच जारी तीन एकदिवसीय क्रिकेट सिरिजको अन्तिम खेलमा अष्ट्रेलियाले भारतलाई २८७ को लक्ष्य दिएको छ। भारतको बैंग्लोरस्थित चिन्नास्वामी स्डेडियममा टस जितेर पहिले व्याटिङ गरेको अष्ट्रेलियाले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा २८६ रन जोडेको हो।
अष्ट्रेलियाका लागि स्टिभन स्मिथले शतक प्रहार गरे। १ सय ३२ बलको सामना गरेका स्मिथले १४ चौका र एक छक्काको मद्दतमा १ सय ३१ रन जोडे। यस्तै कप्तान आरोन फिन्च १९ रन जोडेर रनआउट हुँदा मार्नुस लबुस्चङ्नले ५४ तथा एलेक्स केरीले ३५ रनको योगदान दिए।
बलिङतर्फ भारतका मोहम्मद शामीले चार, रवीन्द्र जडेजाले दुई तथा कुलदीप यादव र नवदीप सैनीले एक–एक विकेट लिए। भारत र अष्ट्रेलियाबीचको सिरिज एक–एकको बराबरीमा छ। पहिलो खेलमा भारतलाई १० विकेटले हराएको अष्ट्रेलिया दोस्रो खेलमा ३६ पराजित भएको थियो। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा जित हात पार्ने टोलीले सिरिजमाथि कव्जा जमाउने छ।
मेलवर्न स्टारको दशौ जितमा यस्तो थियो सन्दिपको प्रदर्शन
तिन करोड नेपालीको जित ! गरिब दुखिको भगवान रबि लामिछानेले पाए न्याय ! सफाई पाए लगतै यस्तो भने-
दोस्रो खेलमा पनि मलेसियाले पानी माग्न पाएन , नेपाल १७० रनले बिजयी
January 21, 2020 N20
आयरल्याण्डका पाउल स्टर्लिङले चितवन टाइगर्सबाट ईपीएल खेल्ने
February 10, 2020 February 10, 2020 N20
‘रोनाल्डो हाम्रो क्लबलागि धेरै नै बुढो भए’
February 8, 2020 N20